Top 10 Barnaamijyada PhD oo si buuxda loo maalgeliyey oo leh Xiriirada Codsiga 2022
Top 10 Barnaamijyada PhD oo si buuxda loo maalgeliyey oo leh Xiriirada Codsiga
Raadinta darajada PhD waa qaali, soo mari liiskayaga barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo una dir codsiyada. Waxaa laga yaabaa inaad nasiib yeelato oo aad hesho mid dabooli kara waxbarashadaada dhakhtarnimo oo dhan.
Ardaygii buuxiyey shuruudihii uu ku dhammaystiri lahaa barnaamijka dhakhtarnimada waxaa la guddoonsiiyaa shahaadada PhD waana, illaa hadda, heerka waxbarasho ee ugu sarreeya. Si aad u sii wadato shahaadada PhD, waa inaad dhammaysay bachelor, ka dibna shahaadada mastarka oo ay tahay inay la xiriirto barnaamijka dhakhtarnimada ee aad u socoto. Barnaamijka dhakhtarnimada ayaa ah waxbarasho qoto dheer oo ku saabsan maado gaar ah.
Sidaa darteed, waxaa jiri doona cilmi -baaris iyo shaqo -goob badan, run ahaantii, tan ayaa ah waxaad sameyn doontid sidii arday dhakhtarnimo ah. Waa heer waxbarasho oo xiiso leh waana halka aad ka heli karto si aad u horumariso kartidaada si buuxda. Software -kaas, antivirus -ka, dawada, farsamada, farsamada, ama wax kasta oo ay tahay, oo aad mar walba doonaysay inaad ka dhisto halkaan si aad u dhisto, u abuurto, una horumariso.
Waxaad la shaqayn doontaa sida maskaxda oo kale, oo ay ku jiraan ardayda kale ee qalin jabisay iyo macalimiin caan ah kuwaas oo sameeyay guul ama wax ku biirinta ku saabsan goobtaada waxbarasho. Si kastaba ha ahaatee, ujeeddada cilmi -baaristaadu waa inay u soo bandhigtaa kaalmo macno leh bulshada iyo guud ahaan adduunka.
Barnaamijka PhD waa mid xiiso leh, waxaa lagu siinayaa dhammaan aaladda iyo wax kasta oo kale oo aad u baahan karto si aad ugu fiicnaato shaqadaada. Si kastaba ha noqotee, hoos -u -dhaca ayaa ah inuu aad qaali u yahay sababtan keli ahaaneedna waxay ku kaliftay arday badan inay ka fogaadaan raacitaanka shahaadada dhakhtarnimada.
Arrintan awgeed ayaan ku daabacnay maqaalkan barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo si aadan uga quusan riyadaada. Barnaamijyadan waxay ku yimaadaan qaab deeq waxbarasho, deeq -lacageed, wehelnimo, iyo qaabab kale oo kaalmo maaliyadeed ah laakiin dhammaantood waxay ku wajahan yihiin isku wax. Iyada oo loo marayo fursadaha maaliyadeed ee barnaamijyadan ay bixiyaan, waxaad ku mari kartaa daraasadahaaga PhD iyada oo aan la helin arrimo maaliyadeed.
Dhab ahaantii, taasi waa sida saxda ah ee kaalmooyinka maaliyadeed loo jiheeyo. Waxaa loo aasaasay inay caawiyaan ardayda doonaya inay sii wataan shahaadada dhakhtarnimada laakiin aan xamili karin culeyska dhaqaale. Barnaamijyada si buuxda loo maalgeliyey waxay ku wajahan yihiin bixinta dhammaan khidmaddooda waxbaridda, hoyga, kharashyada cilmi -baarista, qaarkoodna waxay sii wadaan inay siiyaan gunno ama gunno bille ah.
Barnaamijyadan PhD oo si buuxda loo maalgeliyey waxay daboolayaan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba, marba haddii aad samaysay shuruudaha gelitaanka ka dibna u -qalmitaanka deeqda waxbarasho, waxaad heli doontaa deeqda. Tani waxay u oggolaanaysaa ardayda inay si buuxda ugu dhex milmaan cilmi -baaristooda iyo waxbarashadooda iyagoon ka fikirin wax arrimo maaliyadeed ah.
Maxay yihiin Barnaamijyada PhD ee Fulinta Buuxda?
Shuruudaha lagu Dalbado Barnaamijyada PhD -ga oo Dhammaystiran
Barnaamijyada PhD ee Fulinta Lacagta leh oo leh Xiriirada Codsiga
1. Jaamacadda California Irvine (UCI) PhD ee Jarmalka
3. Gargaarka Wehelnimada GRS ee Jaamacadda Boston
4. Jaamacadda Arizona, Waaxda Isbaanishka & Bortuqiiska
5. PhD ee Cilmiga Biyolojiga ee Caafimaadka Dadweynaha ee Jaamacadda Harvard
6. Barnaamijka MIT Sloan PhD
7. Dugsiga Smith ee PhD ee Injineerinka Kiimikada
8. PhD ee Cilmiga Kombiyuutarka ee Jaamacadda Georgetown
9. PhD ee La -talinta Cilmi -nafsiga ee Jaamacadda Wisconsin - Madison
10. PhD ee dhaqaalaha ee Jaamacadda Emory
Barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo waa fursadaha kaalmada maaliyadeed sida deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo, kuwa la shaqeeya, iyo deeqaha bixiya waxbaridda la dhaafay oo bixiya gunno ama kaalmo sannadle ah ama bille ah. Qaar baa daboola caymiska caafimaadka iyo dheefaha kale. Si kastaba ha noqotee, gelitaanka barnaamijyada sidan oo kale ah waa mid aad u tartan badan barnaamijka gaarka ahna wuxuu qaataa waqti badan si loo dhammaystiro.
Shuruudaha lagu dalbado barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo way ku kala duwan yihiin hay'adda iyo hay'adda bixisa deeqda laakiin shardiga ugu weyn ayaa ah in laguu oggolaaday inaad gasho hay'ad sare oo la aqoonsan yahay si aad u sii wadato barnaamijka shahaadada dhakhtarnimada.
Haysashada waxqabad tacliimeed oo aad u fiican ayaa sidoo kale kordhin doonta fursadahaaga ah in laguu oggolaado mid ka mid ah barnaamijyada. Dukumentiyada sida dib -u -bilaabista ama CV -yada, qoraallada, bayaannada ujeeddada, iyo waraaqaha talo -bixinta ayaa sidoo kale la tixgelin doonaa marka la tixgelinayo inay ku siiyaan barnaamij PhD oo si buuxda loo maalgeliyey.
Barnaamijyada si buuxda loo maalgeliyey ee halkan lagu soo ururiyay waxay daboolaan dhinacyo badan oo kala duwan sida ganacsiga, injineernimada, kalkaalinta, cilmi -nafsiga, sayniska kombiyuutarka, iyo qaar kaloo badan. Deeqaha la bixiyay waxay u dhexeeyaan $ 2,000 ilaa in ka badan $ 60,000, xiriirada arjiga gaarka ah ayaa si isku mid ah laguu siiyay si aad isla markiiba u dalbato.
Jaamacadda California Irvine (UCI) PhD ee Jarmalka
Pardee RAND School Graduate School
Gargaarka Wadaagga GRS ee Jaamacadda Boston
Jaamacadda Arizona, Waaxda Isbaanishka & Bortuqiiska
PhD ee Sayniska Biyolojiga ee Caafimaadka Dadweynaha ee Jaamacadda Harvard
Barnaamijka PhD MIT Sloan
PhD -da Dugsiga Smith ee Injineerinka Kiimikada
PhD ee Sayniska Kombiyuutarka ee Jaamacadda Georgetown
PhD ee Cilmi -nafsiga La -talinta ee Jaamacadda Wisconsin - Madison
PhD ee Dhaqaalaha ee Jaamacadda Emory
UCI waa mid ka mid ah iskuulada ugu fiican California iyo guud ahaan Mareykanka, xitaa qaar ka mid ah barnaamijyadeeda ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka. Machadku wuxuu bixiyaa barnaamijyo tacliimeed oo aad u ballaaran oo ku jira shahaadada koowaad iyo barnaamijyada qalin -jabinta oo ay ku jiraan PhD af Jarmal. Barnaamijkan PhD waxaa bixiya UCI European Studies Studies ee hoos yimaada Dugsiga Aadanaha.
Ardayda xiiseyneysa inay ku sii wataan PhD -da Jarmalka waxay ku sameyn karaan UCI waxaana lagu qori karaa maalgelinta wehelnimada. Dhammaan ardayda PhD ee la geliyay barnaamijkan waxay ka heli doonaan maalgelin shan sano ah Iskuulka Bani-aadamnimada oo ka kooban isku-darka wehelnimada, kaaliyaha macallinka, iyo kaalmada kaalmada cilmi-baarista. Waxay kaloo dabooli doontaa khidmadaha gobolka, caymiska caafimaadka, iyo waxbarashada dadka aan degganayn.
Barnaamijku wuxuu leeyahay waqti kama dambeys ah iyo sidoo kale shuruudaha kale ee arjiga oo aad ka heli karto iskuxirka hoose. Tani waa fursad ay tahay inaadan khasaarin, hadda u tag.
Pardee RAND Graduate School wuxuu ku yaal Santa Monica, California, wuxuuna bixiyaa mid ka mid ah barnaamijyada PhD ee sida buuxda loo maalgeliyo. Dugsigan qalin -jabiyay wuxuu siiyaa fursado kaalmo maaliyadeed arday kasta oo PhD ah oo soo gala mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada waana u siman yahay ardayda caalamiga ah.
Sannadka ugu horreeya, ardaydu waxay helaan deeq waxbarasho oo dhammaystiran waxayna sidoo kale kasbadaan wehelnimadooda cilmi-baarista iyagoo cilmi-baaris ka samaynaya RAND. Sannadka labaad, ardayda waxaa la siiyaa deeq waxbarasho qayb ahaan ah si ay u daboolaan waxbarashada harsan, waxay shaqeeyaan tiro sii kordheysa oo maalmaha tababarka shaqada ah waxayna kasbadaan wehelnimo cilmi baaris oo ballaaran.
Ugu dambayntii, sannad-koodii 3-5, khidmadda wax-barashada ayaa la dhimayaa oo wehelnimada cilmi-baarista ardaydu way kordhaysaa iyo sidoo kale maalmaha tababarka shaqada. Qiimaha buuxa ee caymiska caafimaadka ardayda ayaa sidoo kale la daboolay.
Dugsiga Sare ee Farshaxanka iyo Sayniska (GRS) ee Jaamacadda Boston wuxuu siiyaa kaalmo wehelnimo oo dhammaystiran 5 sano dhammaan ardayda PhD ee dhowaan la aqbalay. Gargaarku wuxuu noqon karaa isku-darka wehelnimo aan adeeg lahayn (sida wehelnimada Dean), wehelnimada barista, ama wehelnimada cilmi-baarista dhakhtarka, iyadoo ku xiran waaxda oggolaanshaha.
Iyada oo qayb ka ah abaalmarinta wehelnimada, Jaamacadda Boston waxay dabooli doontaa kharashka ka -qaybgalkaaga shakhsi ahaaneed ee Qorshaha Caymiska Caafimaadka Ardayga ee Aasaasiga ah ee dugsiga kaas oo ku kacaya $ 3,054. Gargaarka wehelnimada waa mid ka mid ah barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyey oo quseeya dhammaan ardayda galaya GRS sidoo kale waxay ku fidsan yihiin ardayda caalamiga ah.
Jaamacadda Arizona waxay ku taal Tucson, Arizona, iyada oo loo marayo Kuliyaddeeda Aadanaha waxay siisaa dhowr nooc oo taageero maaliyadeed ah PhD iyo ardayda Master -ka ee Waaxda Isbaanishka iyo Aadanaha. Kaaliyeyaasha qalin-jabinta ee Waaxda Isbaanishka iyo Boortaqiiska waxay bixiyaan fursado wax-barid waqti-dhiman ah iyo sidoo kale dhaafitaanno waxbarasho oo loogu talagalay dadka aan degganayn.
Culeyska waxbaridda ee caadiga ah waa saddex illaa afar koorso sanadkiiba, iyada oo la kormeerayo barashada koorsooyinka shahaadada koowaad ee Isbaanish iyo Bortuqiis. Adigoo ah arday PhD ah oo ka shaqeynaya ballanta iskaashiga qalin -jabiyaha, waxaad heli doontaa gunno sannadle ah oo ah $ 8,513 si aad wax u barato hal fasal ama $ 17,025 oo aad barato laba fasal.
Ka -dhaafitaannada Wax -barashada Qalin -jabinta (Ka -dhaafitaanka RC) ayaa laga yaabaa inay bixiyaan dhammaan ama qayb ka mid ah kharashka waxbarashada ardayga qalin -jabiyay iyo sidoo kale inay bixiyaan fursado kale oo wehelnimo. Saaxiibbada kale iyo kaaliyayaasha ardayda PhD waxaa ka mid ah Ruth Lee Kennedy Fellowship, Kaaliyaha Qalin -jabinta ee Alcala de Henares, Spain, Luqadda Dibadda, iyo Daraasaadka Aagga (FLAS), Isbahaysiga FLAS ee Xagaaga, Karen L. Smith Fellowship, Tinker Grant Research Field Research, iyo Deeqda Safarka ee Isbaanishka iyo Bortuqiiska.
Harvard waa mid ka mid ah iskuulada ugu fiican adduunka waxayna siisaa barnaamijyo PhD oo si buuxda loo maalgeliyo ardayda Sayniska Biyolojiga ee Caafimaadka Dadweynaha. Waa waax hoos timaada Harvard TH Chan School of Public Health kaas oo ardayda u diyaariya tacliin ama mihnad cilmi baaris oo saamayn weyn leh.
Dhammaan ardayda, oo ay ku jiraan ardayda caalamiga ah, ee qirtay PhD ee Sayniska Biyolojiga ee Barnaamijka Caafimaadka Dadweynaha ayaa loo ballan qaaday taageero dhammaystiran muddo shan sano ah. Taageeradu waxay dabooshaa mushaharka, waxbarashada, iyo caymiska caafimaadka, maaddaama ay horumar wanaagsan samaynayaan.
Haddii aad codsaneyso barnaamijkan, waa inaad leedahay rabitaan iyo karti xooggan oo aad si xooggan ugu raadin karto aqoonta sayniska si laguu tixgeliyo gelitaanka. Shuruudaha ugu yar waxaa ka mid ah shahaadada bachelorka iyo diyaarinta shahaadada koowaad ee cilmiga. Gargaarkaan maaliyadeed waa mid ka mid ah barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo oo arday kasta oo caalami ah uu raadinayo, ku bood fursadan oo ka hel shahaado hay'adda ugu fiican adduunka.
Machadka Teknolojiyadda Massachusetts wuxuu bixiyaa barnaamijyo ganacsi iyo maareyn dhammaan heerarka waxbarasho iyadoo loo marayo MIT Sloan School of Management. PhD-da barnaamijyada ganacsiga iyo maareynta ayaa sidoo kale lagu bixiyaa qaybtan halkaas oo ardayda barnaamijka ku hawlan ay ku sameeyaan cilmi-baaris adag oo ku saleysan edbinta si ay u helaan xirfado aqooneed oo heer sare ah una noqdaan hoggaamiyeyaal dhinacyadooda cilmi-baarista.
Haddii ay dhacdo inaad barnaamijka ku leedahay heer sare tacliimeed markaa waxaad heli kartaa xirmo maaliyadeed oo daboolaya waxbarashada, caymiska caafimaadka, iyo gunnada. Laptop cusub (oo la bixiyay bilowga sannadka koowaad iyo afaraad) iyo safarka shirka ama miisaaniyadda cilmi -baarista ee $ 4,500 ayaa si siman loo bixiyaa. Barnaamijku waa shan sano oo maaliyaddu waxay dabooli doontaa muddada oo dhan.
Ardaydu waxay helaan waxbarashada sanad-dugsiyeedka oo buuxa oo lagu daray gunno bille ah oo ah $ 3,918 taas oo ku imaanaysa wadar ahaan $ 47,016 sanadkii muddo 5 sano ah. Ardaydu waxay sidoo kale helaan 12 shuruudood oo ah gunnada wehelnimada muddada 15 -ka shuruudood, caymiska caafimaadka ee $ 3,269 sanadkii ayaa sidoo kale la daboolay. Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo ee ganacsiga ay tahay inaad si qoto dheer u sahamiso, MIT waa midda ugu fiican adduunka, tani waa fursad.
Dugsiga Smith waxaa si buuxda loogu yaqaanaa Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering. Waa dugsi hoos yimaada injineernimada Cornell, qaybta injineernimada ee Jaamacadda Cornell - mid ka mid ah dugsiyada Ivy League ee sharafta leh. Waxaad ku sii wadan kartaa PhD injineernimada kiimikada dugsiga haddii aad ka soo baxdo shuruudaha gelitaanka si laguu aqbalo oo aad u hesho helitaanka maaliyad buuxda.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu u diyaariyo ardayda xirfadaha tacliinta iyo cilmi -baarista, wuxuu ku dhammaadaa afar illaa shan sano. Intaad ku guda jirto barnaamijkan, uma baahnid inaad ka walwasho maaliyadda maadaama lagu siin doono kaalmo maaliyadeed oo la taaban karo. Gargaarkan ayaa sii socon doona si uu u daboolo waxbarashadaada oo dhan, gunnada, iyo caymiska caafimaadka, ha ahaato wehelnimo, kaaliyaha cilmi -baarista, ama kaaliyaha caawinta barashada.
Ardaydu waxay heli doonaan gunno buuxda sagaal bilood iyo taageero xagaaga oo dheeraad ah.
PhD -da sayniska kombiyuutarka ee Jaamacadda Georgetown waxay bixisaa mid ka mid ah barnaamijyada PhD ee sida ugu wanaagsan loo maalgeliyo. Waaxda Sayniska Kombiyuutarka waxay siisaa kaalmo maaliyadeed ku saleysan mudnaan ardayda PhD shanta sano ee ugu horreysa tacliinta iyada oo loo marayo deeqo waxbarasho iyo kaaliyayaal.
Gargaarka maaliyadeed wuxuu daboolayaa gunnada, kharashka waxbarashada, iyo caymiska caafimaadka. Hoos ka eeg waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga iyo shuruudaha kale Haddii aad rabto inaad ku hormariso waxbarashada barashada kombiyuutarka heerka PhD, kani waa mid ka mid ah barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo ee sayniska kombiyuutarka waa inaad sahamisaa.
Ardayda ka diiwaangashan barnaamijka PhD ee La -talinta Cilmi -nafsiga ee Jaamacadda Wisconsin - Madison waxaa loo ballan -qaaday taageero maaliyadeed. Maalgelinta waxaa lagu dammaanad qaadaa wax aan ka yarayn heer ah 50% muddada dammaanadda, haddii ardaydu sii wadaan waxqabad muuqda.
Marka la eego shuruudaha dammaanadda, ilaha maaliyadeed ee kala duwan ayaa siin kara taageerada ardayda oo ay ku jiraan wehelnimo, kaaliye macallin, kaaliyaha mashruuca, kaaliyaha cilmi -baarista, ama muxaadaro gacan -ku -caawinta baridda. Taageerooyinkaan waxay noqon karaan kuwo dabooli kara waxbarashada, bixin kara gunnada, iyo caymiska caafimaadka. Ardayda ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay sahamiyaan fursadaha maalgelinta dibadda. Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada PhD ee si buuxda loo maalgeliyo oo ay tahay inaad sidoo kale sahamiso.
Sida laga soo xigtay websaydhka Jaamacadda Emory, ardayda ka qaybgalaya barnaamijka PhD dhaqaalaha ayaa sida caadiga ah hela taageero buuxda, inkasta oo aan la hubin. Ardaydu waxay helaan gunno ah $ 31,775 sanadkii shan sano, iyo sidoo kale deeq waxbarasho oo dhan $ 65,700 sanadkii. Kaalmo daboolaysa 100% kharashyada caymiska caafimaadka ardayga ayaa lagu daray maalgelinta ardayda la aqbalo.
Ma jiraan shuruudo shaqo oo la xiriira gunnada ardayda sannadka koowaad.
Kuwani waa barnaamijyada PhD ee ugu sarreeya ee ay tahay inaad sahamiso oo aad dalbato maaddaama qaar badan oo ka mid ahi ay aqbalaan ardayda caalamiga ah waxay fursad ka dhigaysaa inay ku faafto dad badan intii suurtogal ah. Barnaamijyadan ayaa aad ugu tartamaya inay galaan, hubiyaan inaad haysato natiijo tacliineed oo aad u fiican si aad u codsato barnaamijyada.
Inta badan barnaamijyada PhD si buuxda ma loo maalgeliyaa?
Barnaamijyada PhD badankood si buuxda ayaa loo maalgeliyaa tanina waa sababta oo ah waxaad ka shaqeyneysaa cilmi baaris u roonaan doonta dugsiga, bulshada, iyo adduunka oo dhan. Sidaa darteed, waxaa lagu siinayaa ilo kugu filan si aad ugu oggolaato baaritaankaaga.
Sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation ee Kanada - PhD
5 Siyaabood oo Cajiib ah oo aad PhD kaga heli karto Australia Aqoonyahan
Deeqda waxbarasho ee Masters ee Yurub 2022
Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Deeq waxbarasho oo buuxa Deeqaha PhD Deeq waxbarasho oo diblooma ah Cilmi-baaris iyo Wada-hawlgallo Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka Shahaadooyinka Maraykanka
si buuxda loo maalgeliyey barnaamijyada PhD
Previous Post:5 Dugsiyada Injineerinka ugu Fiican Texas oo leh Deeqo waxbarasho
Post Next:Sidee barashada afafku kuu caawisaa markaad dibadda joogto?